အနုပညာလောကထဲ ဝင်ကာစ ဟိုးအရင်တုန်းက ပုံလေးတွေ နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက ဝိုင်းပြီးကျပ်နေလို့ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန် – Shwe Likes
အနုပညာလောကထဲ ဝင်ကာစ ဟိုးအရင်တုန်းက ပုံလေးတွေ နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက ဝိုင်းပြီးကျပ်နေလို့ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
Shwe | June 24, 2022 | Uncategorized | No Comments
ပိုင်တံခွန် ဆိုတဲ့ ပြည်သူချစ် မင်းသားလေးကို အားလုံးပဲ သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ပြည်သူတွေနဲ့ မိသားစုဆီ ပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့ ကိုပိုင်ကို အားလုံးက ပိုပြီးချစ် ပိုပြီးအားပေး လာကြပါတယ်။
မိသားစုတွေ ကလည်း ကိုပိုင်ကို အရမ်းသတိရလွမ်းဆွ တ်နေသလိုပြန်တွေ့ တဲ့အချိန်မှာလည်းအလွမ်းသ ယ်လို့မဝဖြစ်နေ တာပါပဲနော်။ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ကိုပိုင်ပြန်ရောက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီး အားပေးချစ်ခင်လာကြပါတယ်။
အရင်ကလိုပဲ အနုပညာလုပ်ငန်း‌တွေကို ပြန်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသလို သူ့ရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတိုင်းကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေက တခဲနက်အား‌ပေးကြတာပါပဲ။ တိရစ္ဆာန် အကောင် ပ‌‌‌လောင်လေး‌တွေကို ချစ်တတ်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း‌ ‌လေး‌တွေကို ‌‌မွေးတတ်တဲ့ သူဟာ စိတ်ထားနူးညံ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူလေး လည်းဖြစ်ပါတယ်‌နော်….
အနုပညာလုပ်ငန်းထဲကို စဝင်ခါစတုန်းက ကလေးရုပ်လေးနဲ့ မပြင်တတ်မဆင်တတ်သေး‌ပေမယ့်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ ‌တော့အရမ်းကိုတည် ကြည်ခန့်ညားလာ တာ‌ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မက တစ်ခြား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ ပိုင်တံခွန်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ‌အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကို ချစ်ခင်တဲ့သူ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ Social Media acc ထဲကိုဝင်ပြီး သူ့ငယ်ဘဝက ပုံရိပ်လေး‌တွေကို up ကာ ကြည်စားတဲ့ပရိတ်သတ် တွေအ များကြီးရှိလာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က အစပျိုးလိုက်ရာကနေ ကိုပိုင့်ရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေက Social Media ပေါ်မှာ ပြန်ပြီး ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်နော်… အရင်တုန်းက ပုံလေး‌တွေကအခုပြန်ကြည့်တော့ ချစ်လည်းချစ်ဖို့ကောင်း ရယ်လည်းရယ်ဖို့ကောင်းတာမလို့ ကိုပိုင်တစ်ယောက် ရှက်နေရှာပါတယ်နော်…
ဟီ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေချစ်လို့ ကျီစားတာဆိုတော့လည်း ကိုပိုင်တစ်ယောက်ပျော် လည်း‌ပျော်ရှက်လည်းရှက်ပေါ့ ‌နော်… Credit;
ပိုင္တံခြန္ ဆိုတဲ့ ျပည္သူခ်စ္ မင္းသားေလးကို အားလုံးပဲ သိၾကလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ျပည္သူေတြနဲ႔ မိသားစုဆီ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိတဲ့ ကိုပိုင္ကို အားလုံးက ပိုၿပီးခ်စ္ ပိုၿပီးအားေပး လာၾကပါတယ္။
မိသားစုေတြ ကလည္း ကိုပိုင္ကို အရမ္းသတိရလြမ္းဆြ တ္ေနသလိုျပန္ေတြ႕ တဲ့အခ်ိန္မွာလည္းအလြမ္းသ ယ္လို႔မဝျဖစ္ေန တာပါပဲေနာ္။ ပရိတ္သတ္ေတြကလည္း ကိုပိုင္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႕ကိုအရင္ကထက္ပိုၿပီး အားေပးခ်စ္ခင္လာၾကပါတယ္။
အရင္ကလိုပဲ အႏုပညာလုပ္ငန္း‌ေတြကို ျပန္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသလို သူ႕ရဲ႕ အႏုပညာလုပ္ငန္းတိုင္းကိုလည္း ပရိတ္သတ္ေတြက တခဲနက္အား‌ေပးၾကတာပါပဲ။ တိရစၧာန္ အေကာင္ ပ‌‌‌ေလာင္ေလး‌ေတြကို ခ်စ္တတ္ၿပီး ထူးထူးဆန္းဆန္း‌ ‌ေလး‌ေတြကို ‌‌ေမြးတတ္တဲ့ သူဟာ စိတ္ထားႏူးညံ့တဲ့ တိရစၧာန္ခ်စ္သူေလး လည္းျဖစ္ပါတယ္‌ေနာ္….
အႏုပညာလုပ္ငန္းထဲကို စဝင္ခါစတုန္းက ကေလး႐ုပ္ေလးနဲ႔ မျပင္တတ္မဆင္တတ္ေသး‌ေပမယ့္လည္း အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ‌ေတာ့အရမ္းကိုတည္ၾကည္ခန္႔ညားလာတာ‌ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတင္မက တစ္ျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာပါ ပိုင္တံခြန္ဆိုတဲ့နာမည္တစ္လုံးနဲ႔ ‌ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
သူ႕ကို ခ်စ္ခင္တဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ Social Media acc ထဲကိုဝင္ၿပီး သူ႕ငယ္ဘဝက ပုံရိပ္ေလး‌ေတြကို up ကာ ၾကည္စားတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြအမ်ားႀကီး႐ွိလာခဲ့ပါတယ္။
တစ္ေယာက္ေယာက္က အစပ်ိဳးလိုက္ရာကေန ကိုပိုင့္ရဲ႕ ငယ္ငယ္တုန္းက ဓာတ္ပုံေတြက Social Media ေပၚမွာ ျပန္ၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ပါတယ္ေနာ္… အရင္တုန္းက ပုံေလး‌ေတြကအခုျပန္ၾကည့္ေတာ့ ခ်စ္လည္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္း ရယ္လည္းရယ္ဖို႔ေကာင္းတာမလို႔ ကိုပိုင္တစ္ေယာက္ ႐ွက္ေန႐ွာပါတယ္ေနာ္…
ဟီ… ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပရိတ္သတ္ေတြခ်စ္လို႔ က်ီစားတာဆိုေတာ့လည္း ကိုပိုင္တစ္ေယာက္ေပ်ာ္ လည္း‌ေပ်ာ္႐ွက္လည္း႐ွက္ေပါ့ ‌ေနာ္… Credit;
သမီးကြီး မြမိုးဂင်္ဂါကို မြန်မာနိုင်ငံမှာတမင်ထားခဲ့တာလို့ ဝေဖန်အပြစ်တင်တဲ့ သူတစ်ယော က်ကို ထိရှတဲ့စကား လုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပလို က်တဲ့ ချမ်းချမ်း
ခန့်ညားလှတဲ့ယူနီဖောင်း အပြည့်အစုံနဲ့ ပြည်သူ့ရဲဘော်ဘဝကို ခံယူထားတဲ့ MRTV အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဦးကျော်သက်လင်း
ကမ္ဘာ့မော်ဒယ်လောကမှာ နာမည်ရနေ တဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်မလေး သက်သက်သင်း ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးများ
အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ သူမရဲ့ဖျင်ကို ထိုင်ဘလိမ်းနေတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်ခင်လွှမ်း